१३ वर्षकी छोरीको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, आमाबाबु छोरीको फोटो छातीमा टाँसेर न्याय खोज्दै कञ्चनपुरबाट काठमाडौं आउँछन्, उनलाई न्याय दिने कसले ? संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ, त्यो संविधानले यिनलाई न्याय दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो निर्मला पन्त मरिन् कि संविधान मर्‍यो ? शासन मर्‍यो कि प्रशासन, अदालत, सुरक्षा निकाय मर्‍यो ? यो प्रत्येक आमाको प्रश्न हो । नेपाली आमा बाबुले यसरी छोरीको फोटो छातीमा टाँसेर न्याय माँदै हिड्नुपर्दा नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्ने कि नेपाल बर्बर युगमा प्रवेश गर्‍यो भनेर मान्ने ?
राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिला भए । अहिले पनि राष्ट्रपति महिला छिन् । महिला प्रधानमन्त्री हुनमात्र बाँकी छ । यसरी लोकतन्त्र महिलाका लागि उत्साह बनेर आएको थियो । आज पनि राष्ट्राध्यक्ष महिला भएकाले महिलाहरु सक्षम छन्, महिला पनि देशमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर रहेका छन्, महिलाको नेतृत्व सुरु भयो भन्ने अवस्था छ ।
तर, संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि, चुनाव भएर स्थिर सरकार आएपछि, महिलामाथि बलात्कार र हत्याका श्रृंखलावद्ध घटनाहरु घटिरहेका छन् । बलात्कार त्यसै पनि अमानवीय, असभ्य घटना हो, त्यसमाथि हत्या, यो त आततायी अवस्थाको संकेत हो । त्यसैले संवैधानिक रुपमा सम्पन्न र सुशासन तथा समृद्धिमा अघि बढेको मुलुकमा यस्ता अपराध रोकिनैपर्छ । यसका लागि समाजका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक भएर यस्ता आततायी, अमानवीय र असभ्य घटनाक्रम रोक्नैपर्छ । राज्यले यसमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
हुन त गृहमन्त्रीले संसदमा उभिएर अपराधीको निकट पुगेको र छिटै अदालतको कठघरामा उभ्याउने बताए । गृहमन्त्रीले यस्तो विवरण दिनै नपरोस्, त्यसतिर गृहप्रशासन सजग हुनुपर्छ । बाल बलात्कार, यौन दूराचार, हत्याजस्तो निन्दनीय घटनाले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक जीवन पद्धतिमा नै प्रश्न खडा गर्छ । ल्याकत र हैसियतमा नै प्रश्न उठाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रणाली यस्ता घटनाबाट मजबुत हुनसक्दैनन् । नेपाललाई सभ्यताको मार्गबाट अगाडि बढ्न मुस्किल पर्छ ।
निर्मलाको बलात्कार र हत्याको घटना र उनका मातापिताले राजधानी आएर न्यायको भीख माँग्नुपर्ने अवस्थाले शासन व्यवस्थालाई कमजोर साबित गरिदिएको छ । यतिमात्र होइन, गंगामायाँले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही गरियोस् भनेर अनसनमै छिन् । बाबु अनसन मै मरे, आमाले न्याय पाइनन्, अदालतले आरोपितलाई बरी गरिदियो । गंगामायाँले भनिन्– यो देशमा न्याय पाइदैन । आमाले न्याय नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? हत्या बलात्कारीलाई दण्ड दिन नसक्ने लोकतन्त्र किन दण्डहीनतातिर उन्मुख छ ।
गृहमन्त्रीले बलात्कारी र हत्यारा मोटोघाटो छ भन्ने बयान दिए । को हो त्यो बलवान हत्यारा र बलात्कारी । यो सरकार, संविधान, लोकतन्त्र, सुरक्षा निकायभन्दा पनि बलवान छ भने लोकतन्त्र होइन, अपराध तन्त्र छ किन नभन्ने ?
देशै उर्लिएको छ, बलात्कार र हत्या विरुद्ध । देशका जनप्रतिनिधि किन सुतेर बसेका होलान् ? राज्यले न्याय गर्नुपर्छ भनेर नागरिक सडकमा उत्रिसकेपछि पनि निदाइरहने कानुन विधिको शासनका लागि कति प्रभावकारी होला ?